Soo degso Tom Airbus A330-200MRTT FSX - Rikoooo
Tom Airbus A330 MRTT FSX & P3D
downloads 30 836
Author: Model by Thomas Ruth, Updates by Chris Evans & Louis Quintero & Rikoooo
Updated on 03 / 06 / 2018: Hada la jaan qaadaya Prepar3D v4 +, laba noole: Tanker Jarmal iyo RAAF, cabirro cusub, qaabab cusub oo HD ah oo loo yaqaan 'cockpit', dhawaaqyo cusub, guddi cusub oo loo yaqaan '2d, FMC, oo lagu daray Autoland CAT II iyo III, oo lagu daray Airbus GPWS.
Taangyo tayo sare leh oo nooc kasta leh FSX iyo Prepar3D. Wuxuu ku yimaadaa iskudhiska casriga ah iyo dhawaqyada caadada u ah. Ku soo dar boodhadh firfircoon oo firfircoon oo shaqeynaya, aqri buugga si aad u baratid sida loo isticmaalo
Hoos waxaa ku yaal shaashadda muraayadaha rakibaadda (wareegga gaduudan) oo laga heli karo oo keliya khadka dusha sare ee gaaska.
Sawirooyin kala duwan
Halka iyo sharaxaad of diyaaradaha dhabta ah:
The A330 Multi Gaadiidka Booyad Doorka (MRTT) waa derivative a military oo ka mid ah diyaaradaha Airbus A330-200. Waxaa loogu tala galay sida laga gami iyo gaadiidka diyaaradaha dual-doorka hawada-to-hawada a. Wixii ergooyinka hawada-to-hawada laga gami MRTT A330 ah in lagu qalabeeyaa kartaa isku-dar ah mid ka mid ah hababka soo socda:
* Airbus Military Anteenada System Boom Refuelling (ARBS) ee diyaarad aqbalana kafaalaqaade loo qalabeeyay.
* Qeybiyo gami Cobham 905E garabka hoos-for diyaaradaha aqbalana baaritaan loo qalabeeyay.
* Cobham 805E sooctey Refuelling Unit (FRU) ee diyaarad aqbalana baaritaan loo qalabeeyay
* Rakibaadda Universal Anteenada System kafaalaqaade Refuelling (UARRSI) is-gami.
A330 MRTT waxa uu leeyahay awood shidaalka ugu badan ee 111,000 kg (245,000 LB). awoodda shidaalka Standard u ogolaanaya alaabtii ah kg 45,000 dheeraad ah oo xamuul ah. garabka A330 MRTT ee uu leeyahay qaab-dhismeedka caadi afar-engine A340-200 / -300 la xoojiyay goobaha kordhaya for matoorada motor ka A340 ee. Sidaa darteed garabka A330 MRTT ee waxay u baahan tahay beddelaad wax yar loo isticmaalo oo ka mid ah hardpoints u qeybiyo gami garabka.
The qol A330 MRTT waxaa loogu talagalay si loo hubiyo in gaadmada ah fadhiga si mug leh fasalka kasta, in loo kordhiyo awoodda iyo raaxo labadaba. qol waxaa lagu qaybiyay kartaa kala duwan oo badan oo Layouts ka kuraasta 253 in qaabeynta saddex fasal, iyada oo rakaab 298 in qaabeynta laba fasal, si 380 rakaab ah in hal qaabeynta fasal. qol waxaa laga buuxiyey design ah attractively casriga ah. Astaamahani waa awood kala duwan oo dhamaystiran oo gaadmada ka gaadiidka ciidamada gaarsiiyaa in ahaanayta adag ku haboon VIP iyo marti ergooyinka. An optional Crew Naso qol (CRC), ku yaal qol hore lagu rakibi karo, waayo shaqaale oo dheeraad ah si ay u kordhiyaan wakhtiga diyaar u ah shaqada a. qol The rakaabka ee MRTT A330 la siin karaa set ah airstairs saari karo in la karsiiyo shaqaale iyo rakaab ah in ay galaan iyo ka tago diyaaradda markii airbridges ama qalabka taageerada dhulka aan la heli karin.
MRTT A330 ayaa sidoo kale waxaa lagu qaybiyay kartaa inuu sii adkeeyo Qaxidda Medical hawlgallada (Medevac). size badan ee ku sooctey fasaxaya dabacsanaan ugu badnaan iyo hubisaa raaxada bukaanada oo dhan, tusaale ahaan ilaa 130 bareelle caadiga ah la fulin karo.
Sida ku-A330 200, MRTT A330 ka mid ah laba dhigan sagxad hoose xamuul (weeraryahanka iyo AFT) iyo awoodda a bulk degaanka taas oo sii caddaynaysa miday ee diyaaradda. qabtay xamuulka ayaa la beddelay si ay u awoodaan si ay u qaado ilaa 8 ugalay ciidamada ee intaa dheer in dadka rayidka ah ULD.
milgadaa ee MRTT A330 ka awood tiro badan oo ah fursadaha xamuul in la qaado in qol xamuul sharraxaa weyn optional. Laga soo bilaabo weel heerka ganacsiga iyo ugalay dhex military, ISO iyo ugalay NATO (oo ay ku jiraan kuraasta) iyo weelasha, qalabka military iyo waxyaabo kale oo badan oo kuwaas oo ku raran albaabka xamuul ah.
Standard ganacsi A330-200s waxaa ka samatabbixiyey Airbus Golaha Line Final ee Toulouse (France) si Airbus Military Centre badalidda ee Getafe (Spain) ee habboon ee nidaamka gami iyo hage military. bixinta ugu horreysa ee macaamiisha furitaanka, Australia waxaa loo qorsheeyay bartamihii 2010. Adeegyada Difaaca Qantas waa diinta afarta A330-200s haray ee ay xarunta Airport Brisbane oo wakiil ka EAD for RAAF ah.
Xirmooyinka Hawada A340 Mega xirmo Vol 2 FSX & P3D
Xirmooyinka Hawada A340 Mega xirmo Vol 1 FSX & P3D
JetBlue A320 Mega Xidhmo FSX & P3D 2
Ciidanka Cirka ee A400M v2.0 FSX & P3D
Airbus A350-900 XWB Xirmooyinka Livery Multi Livery Pack FSX & P3D